मानव जीवनका लागि अमृत बुटी: गहुँको जमराको जुस - ज्ञानविज्ञान
अध्ययनले गहुँको जुसमा अत्याधिक औषधीय तत्व हुने गरेको पत्ता लागेको छ । यसलाई सजिलै बनाउन सकिन्छ, धेरै खर्च पनि लाग्दैन, बनाउन समय पनि लाग्दैन । यद्यपी त्यसबाट स्वास्थ्यमा भने चमत्कारिक लाभ मिल्छ । यो हो, गहुँ को जमराको जुस । हामीले दशैंमा जसरी जमारा उमार्छौ, ठिक उसैगरी गहुँ को जमरा उमार्न सकिन्छ । यसलाई प्रकृतिको अनमोल देन मानिन्छ ।
किनभने यो अमीनो एसिड, इन्जाइम, भिटामिन र प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो । यी पोषक तत्वले शरीरको मृत्त कोशिकालाई पूनर्जीवन दिन्छ र पीएच लेभल सन्तुलित राख्छ । भेज वा ननभेज खानुभन्दा बढी गुणकारी एवं फाइदाजनक हुन्छ, गहुँ को जमराको जुस । यसले शरीरमा अक्सिजनको कमी पुरा गरेर शक्ति प्रदान गर्छ । यसले कमजोर हटाउँछ । शरीरको उर्जा बढाउँछ ।
के छ त यसको फाइदा
छालालाई जवान राख्ने – छालालाई जवान, चम्किलो, मुलायम राख्नका लागि गहुँ को जमराको जुस एकदमै प्रभावकारी हुन्छ । किनभने यसमा प्राकृतिक न्यूट्रिशन र एन्टि अक्सिडेन्ट भरपुर मात्रामा पाइन्छ । यी तत्वले शरीरमा बुढोपन आउन दिदैन । नियमित रुपले यो पेय पिउँदा छाला हाइड्रेट रहन्छ । छालाको दाग, धब्बा पनि हट्छ । चाहुरीपन हट्छ ।
केसलाई कालो र स्वस्थ्य बनाउँछ
समय नपुगी कतिको केस फुल्ने गर्छ । हाँगा फाट्ने, रुखो हुने, झर्ने समस्या पनि धेरैले झेलिरहेका हुन्छन् । यदि दिनहुँ गहुँ को जमराको जुस पिउने हो भने केसका यी तमाम समस्या हट्छ ।
गहुँ को जमराको जुसले शरीरमा रक्त संचार प्रक्रिया चुस्त बनाउँछ । यसले शरीरमा नयाँ रगत बनाउँछ र पुरानो रगत विस्थापित हुन्छ । साथै शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा पनि बढाउँछ ।
ब्लड शुगर नियन्त्रण गर्छ
मधुमेह नियन्त्रणका लागि पनि गहुँ को जमराको रस पिउनुपर्छ । यसले रगतमा ग्लूकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्छ ।
गहुँ को जमराको जुसमा क्यान्सर प्रतिरोधी क्षमता हुन्छ । यसमा रहेको क्लोरोफिलले क्यान्सरको कोशिकालाई बढ्न दिदैन । किमोथेरापी वा रेडियोथेरापीको क्रममा पनि यस्तो रस पिउन सल्लाह दिइन्छ ।
कब्जियतको समस्या झेलिरहेकाहरुले पनि गहुँ को जमराको जुस सेवन गर्न सक्छन् । यसले शरीरको पाचन क्रिया चुस्त राख्छ ।
यो जुस पिउनका लागि कुनै निश्चित समय हुँदैन । तर, यो जुस पिउनुभन्दा आधा घण्टा अघि वा पछिखानपिन गर्नु हुँदैन ।
बिहान खाली पेटमा गहुँ को जमराको जुस पिउनु बढी फाइदाजनक हुन्छ ।
अग्र्यानिक बिजको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिला गहुँको बिजलाई एक भाँडामा आठ देखि दश घण्टासम्म पानीमा भिजाएर राख्ने ।
अब कुनै गमलामा थोरै माटो राख्ने । उक्त गमलामा त्यती नै बिज राख्ने, जसलाई माटोले राम्ररी ढाक्न सकिन्छ ।
अब गमलामा पानी राखेर ओझेल भएको स्थानमा राख्नुपर्छ ।
एक हप्तासम्म एक-एक वटा गमलामा यसरी नै बिज रोप्नुहोस् ।
सात दिनपछि पहिलो पटक रोपेको गमलामा गहुँ अंकुराउन थाल्छ ।
खान योग्य जमरा काटेपछि उक्त खाली गमलामा पुन बिज रोप्नुहोस् ।
गमलामा हरेक दिन पानी हाल्नुपर्छ । यसलाई घामको सोझो सम्पर्कमा राख्नु हुँदैन ।
गहुँको जमरा उमार्नका लागि १८ देखि २० डिग्री तापमान उत्तम हो ।
पोलेको वा काटेको घाउमा गहुँ को जमराले औषधीको काम गर्छ ।
गलाको कुनैपनि इन्फेक्सन क मगर्न यो उपयोगी हुन्छ ।
उच्च रक्तचापका रोगीहरुले नियमिन रुपमा जौको जमराको जुस पिउनुपर्छ ।
यसले मोटोपन नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग गर्छ ।
हामीले सम्बन्धित थप जानकारी दिइएका छाै
कुन रोग लाग्दा कुन जुस पिउने ?
उच्च रक्तचापका रोगीहरूले गाजर, अंगुर र मौसमको जुस पिउनुपर्छ । अनि शारीरिक र मानसिक आराम पनि गर्नुपर्छ । निम्न रक्तचाप लो ब्लडप्रेसर भएकाहरूले गुलिया फलको रस पिउनुपर्छ भने अमिलो फलको रस पिउनुहुँदैन । अंगुर र मौसमको रस लाभदायक हुन्छ ।
जन्डिस जन्डिस हुँदा रोगीले अंगुर, स्याउ र मौसमको रस पिउनुपर्छ । किसमिस डुबाएको पानीले पनि राम्रो गर्छ ।
अनुहारको दाग अनुहारको दाग हटाउनका लागि गाजर, खरबुजा, प्याज, तुलसी र पालुंगोको रस लाभदायी हुन्छ ।
क्यान्सर क्यान्सरबाट मुक्तिका लागि गाजर र अंगुरको रस पिउनु राम्रो हुन्छ ।
भोक नलाग्दा भोक नलाग्ने मान्छेले बिहान खाली पेट कागतीपानी खानुपर्छ अनि खानुअघि अदुवाको पेस्टमा बीरेनुन हालेर खानुपर्छ ।
रगत सफा गर्न शरीरमा विद्यमान रगतलाई शुद्ध बनाउनका लागि कागती, गाजर, काउली, पालुंगो, स्याउ, तुलसी र बेलका पातहरूको रस लाभदायक हुन्छ ।
दमको समस्या दमको रोगीले लसुन, अदुवा, तुलसी, काउली, गाजरको सुप र मुँगको दाल अनि बाख्रीको दूध खाँदा फाइदा पुग्छ ।
करेलाको जुस पिउँनुका फाइदा
प्याङक्रियाजमा हुने क्यान्सरको कोषलाई नष्ट गर्छ
आँखा स्वस्थ राख्न सहयोगी
पाचन प्रक्रिया बलियो बनाउन
भोक बढाउनमा सहयोगी
सुगर नियन्त्रण गर्न सहयोगी
छाला र कपालको लागि फाइदाजनक
तौल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ
घ्युकुमारीको जुस पिउदा हुने फाईदा
घ्युकुमारी प्राय रोप्दा सबै तिर उम्रेने बिरुवा हो । कति मानिसहरुले यसलाई आफ्नो घरको छत्को गमलामा पनि रोपेर यसको फाईदा लिइ रहेका हुन्छन ।
घ्युकुमारी प्रतेक मानिसको घर घरमा आवाश्यक हुन्छ । यसले धेरै प्रकारका रोगसंग लड्ने क्षमत दिन्छ । तल दिएको छ घ्युकुमारीको जुसको फाईदाहरु :
एलोभेराको जुस एक हिसाबले शक्ति दिने पदार्थ हो । यसको नियमित प्रयोगले शरिरलाई दिनभर शक्ति प्रदान गर्छ र स्फूर्त राख्न मद्धत गर्छ । यसले रो प्रतिरोधी क्षमतालाई पनि बृद्धी गर्छ ।
एलोभेरा जुसले रगतको कमीलाई पनि कम गर्छ । एलोभेराको ६ देखी ८ इन्च तासिएको टुक्रा, ५९७ वटा तुलसीकोप पत्ता र ४९५ वटा नीमको पात लिएर थोरै पानीमा हालेर पिस्ने र यसलाई तातो काढाँ बनाएर पिउनाले एनीमिया सञ्चो हुन्छ ।
एलोभेराको जुसले छालालाई समेत फाइदा पुर्याउँछ । यसको नियमित प्रयोगले छालामा चमकता ल्याउनुको साथै स्वस्थ समेत राख्छ । यस्तै, यसले कपाललाई पनि स्वस्थ राख्ने र रूखोपनलाई कम गर्ने गर्छ ।
एलोभेराको जुसले रगतको सञ्चालनलाई ठिक गर्छ । यसले रक्त चापका रोगीलाई पनि निकै फाइदा पुर्याउँछ । यस्तै, मुटुका बिरामीका लागि पनि यो निकै उपयोगी हुन्छ ।
प्रदुषण, जंक फुड, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, स्मोकिङ र ड्रिकिङ्ग आदीबाट शरिरमा बेफाइदा हुने गर्छ र यी खानेकुराले शरिरमा बिकार तत्व बढि मात्रामा निकाल्ने गर्छ ।
एलोभेरा जुसको नियमित सेवन गर्नाले यी सबै विकार पदार्थ बाहिर निस्किने गर्छन् ।
दैनिक रूपमा एक गिलास एलोभेरा जुस पिउनाले तौल घट्छ साथै यसको प्रयोगले बारम्बार भोक लाग्ने समस्याबाट समेत मुक्ति पाइन्छ । साथै, मधुमेह नियन्त्रण गर्न पनि मद्दत गर्छ ।
एलोभेराको जुसले दाँतको पहेलोपन पनि कम गर्छ । यसको दैनिक प्रयोगले दाँतमा हुने किटाणु नष्ट हुन्छ । सासमा हुने दुर्गन्ध समेत यसले कम गर्छ ।
डाइटिङ गर्ने व्यक्तिहरुका लागि तरकारीको जुस अत्यन्त लाभकारी
१. बन्दाकोभीको जूसले पनि तौल घटाउन सघाउ पुर्‍याउँछ । त्यसैले दैनिक एक गिलास बन्दाकोभीको जूस पिउने गरौं । बन्दाकोभीको जूसमा फ्याट कम गर्ने तत्वहरु हुन्छन् ।
२. नियमितरुपमा २-३ महिनासम्म २ सय५० ग्राम टमाटरको जूस पिउँदा पनि तौल कम हुन्छ ।
३. भिटामिन, प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेडबाट भरपूर ब्रोकाउलीमा पनि फ्याट्स बिल्कुल हुँदैन । यसको जूस निकालेर पिउन सकिन्छ वा तरकारी बनाएर खान पनि सकिन्छ ।
४. हरियो सागको जूसले पनि वजन कम गर्न सहयोग गर्छ । आफ्नो स्वादअनुसार हरियो सागको चयन गर्न सकिन्छ ।
५. अरुबखडाको जूसमा कागतिको रस मिलाएर पिउँदा पनि तौल घट्छ ।
६. करेलाको जुस पिउँदा तितो हुन्छ, तर यो जुसले शरीरमा जम्मा भएको बोसोलाई पगाल्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।
७. करेलाको जुसमा कागतिको रस हाल्दा झनै फाइदा मिल्छ ।
८. पाकेको कांक्रोको जूसले पनि तौल घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले तौल मात्रै कम हुने होइन कि छाला पनि चम्काउँछ ।
९. हरेक दिन बिहान एक गिलास लौकाको जूस पिउनुपर्छ । यसमा अत्यधिक फाइबर र कम क्यालोरी हुन्छ ।
१०. नियमित रुपमा आरुको रस पिउनाले पनि तौल कम हुँदै जान्छ ।
Don't Miss it कसरी सफल बन्ने ? आफूले आफूलाई कसरी प्रेरित गर्ने ? एकपटक अवश्य पढ्नुहोला
Up Next प्रति केजि १० लाख पर्ने केशर खेती गर्ने कि ? केशर खेतीबारे सम्पुर्ण जानकारी
अहिले चिसो मौसम सुरु भएको छ । गर्मी महिना सकिएर विस्तारै जाडो बढ्दै गएसँगै रुघा खोकि र चिसोका कारण आउने…